Kit Media & Torolàlana marika - BullyingCanada
ho an'ireo niharam-boina
mila ny fanohananao Fiaraha-monina manasitrana Mamirapiratra ny Olana Afaka manampy ianao Fampahafantarana ny olana manodidina ny fampijaliana tanora
manampy ny ankizy hitady fanampiana sy hitondra azy ireo amin'ny lalana mankany amin'ny fanasitranana.
BullyingCanada mankasitraka ny fanontanian'ny mpanao gazety momba ny andraikitra.
manome hoavy mamiratra kokoa ho an'ny tanora iharan'ny herisetra
BullyingCanada nandritra ny dimy ambin'ny folo taona mahery no nanohana tanora manerana ny firenena — nanampy ireo niharan'ny fampijaliana hahita lalana mankany amin'ny fanasitranana izay mety aminy.
BullyingCanada manome lisitr'ireo tolotra, ary manome ireo tolotra mifototra amin'ny filan'ny tsirairay. Ny tsirairay dia raisina ho olon-tokana fa tsy antontan-taratasy fotsiny. Ny etika manenika ny zavatra rehetra BullyingCanada atao dia: manome hoavy mamiratra kokoa ho an'ny tanora iharan'ny herisetra. Mihoatra noho ny tenifototra izy io, izany no antony BullyingCanada misy.
rehetra fotoana zava-dehibe
Arakaraka ny ela ampahoriana ny zaza iray no vao mainka hitera-pahavoazana ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsaina izay mety haharitra mandritra ny androm-piainany. Ny fampijaliana dia mety hanimba, ka mahatonga ny ankizy hisintona, saro-kenatra ary tsy matoky tena.
Matetika ny ankizy no marary kibo, marary andoha, mitebiteby, ary nofy ratsy. Mety hanjary tsy hatory izy ireo—na mety hatory be loatra. Matetika izy ireo no manao ratsy any am-pianarana noho ny fahaverezan'ny fifantohana sy ny fahatokisana na ny fanatrehana diso rehefa miezaka mandositra ireo mpampijaly. Rehefa tsy mitsahatra, ny fampijaliana dia mety hitarika ny ankizy hanala ny ainy. Ny fampijaliana koa dia mandratra ny mpitazana, izay mety hatahotra ny ho iharan'ny herisetra koa.
Ireo mpampijaly izay mahafantatra fa afaka miala amin'ny herisetra sy herisetra izy ireo indraindray dia mitondra an'io fitondran-tena io amin'ny maha-olon-dehibe azy, ary mety ho lasa mpiremby ara-nofo izy ireo raha tsy izany dia hanao heloka bevava.
Anisan'ny antony izany BullyingCanada Tena ilaina tokoa ny manampy ireo ankizy ampijaliana, faran'izay haingana rehefa manomboka ny fampijaliana
Nilaza ny OPP fa mitombo ny fampijaliana an-tserasera any amin'ny sekoly Kenora
Mitombo ny fampijaliana an-tserasera amin'ny mpianatra any Kenora araka ny filazan'ny Polisim-paritany Ontario. Ny famaritana izay BullyingCanada manome ho an'ny cyberbullying dia mampiasa ny
Inona no dikan'ny hoe mankalaza ny andron'ny lobaka mavokely
Ny ankamaroan'ny Kanadianina dia mihevitra an'i Halifax, Nova Scotia, ho toerana tsara honenana sy hotsidihina, fa ny faritany an-dranomasina ihany koa no toerana nahafantarana ny Andron'ny Akanjo Mavokely.
Tsy azo antoka ny sekoly
Ny zava-misy: Maherin'ny antsasa-manilan'ny mpianatra niharan'ny fampijaliana no nino fa ny mpampijaly azy dia afaka nitaona ny zavatra heverin'ny mpianatra hafa momba azy. MPIANATRA
Dia feno faribolana: Fampidirana Cloudflare Canada - Intelligent CIO Amerika Avaratra
Michelle Zatlyn, mpiara-manorina, filoha ary COO ao amin'ny Cloudflare, dia manazava ny fomba fanitarana ny orinasa Kanadiana, ny fomba fiasan'ny orinasa amin'ny orinasa Kanadiana ary
Aujourd'hui, Cloudflare ary nanambara fa Toronto accueillera ny premier bureau sy ny première équipe de Cloudflare ao Canada.
DIA FIVORIANA FENO: Fampidirana Cloudflare Canada
Androany Cloudflare dia nanambara fa i Toronto dia ho fonenan'ny birao sy ekipa Kanadiana voalohany ao Cloudflare. Fony aho mipetraka any San Francisco amin'izao fotoana izao, dia teraka aho
Torolàlana ho an'ny marika
Fanontaniana? Mila karazana rakitra na variana hafa? Mifandraisa amin'ny Biraon'ny Serasera amin'ny alàlan'ny mailaka: [email voaaro]
Mangataha Fanomezan-dàlana hampiasa BullyingCanada Logo na marika
Misintona Zip File (.pdf, .png, .svg)
Misintona fisie Zip frantsay (.pdf, .png, .svg)
Ampidino ny rakitra Zip frantsay (Greyscale; Mainty; White) (.pdf, .png, .svg)
BullyingCanada Logo tsy misy Tagline
Misintona rakitra Font
Canada Post nekena
Ao amin'ny Memoriam